Otu esi etinye mmanya na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye mmanya na Debian 11 Bullseye
October 1, 2021 September 20, 2021 by Jọshụa James
Lelee Debian ma ọ bụrụ 32-bit ma ọ bụ 64-bit
Wụnye mmanya sitere na ebe nchekwa Debian
Wụnye mmanya sitere na ebe nchekwa WineHQ
Bubata ebe nchekwa
Nwụnye na nhazi biputere
Ọmụmaatụ nke iji mmanya wụnye Windows App
Wepu mmanya (wepu) mmanya
Mmanya bụ oyi akwa ndakọrịta nke mepere emepe na-enye gị ohere ịme ngwa Windows na sistemụ arụmọrụ dịka Unix Linux, FreeBSD, na macOS. Ọ bụ interface na-atụgharị oku sistemu Windows ka ọ bụrụ oku POSIX nhata nke ejiri Linux yana sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dabere na Unix.
Maka ndị ọrụ Linux, Wine bụ onye nzọpụta mgbe ị na-agba ngwa dabere na Windows na sistemụ UNIX. Agbanyeghị, ọ bụghị ngwa Windows niile ga-agba na mmanya ma nwee ike ịnwe mkpọka ma ọ bụ ahụhụ dị iche iche. Nke Wine AppDB bụ nchekwa data nwere ndepụta ngwa anwalela ma kwenye na ọ na-arụ ọrụ n'okpuru mmanya.
Ọmụmaatụ nke uru mmanya na Windows:
Mmanya na-eme ka o kwe omume iji ohere Unix niile siri ike (nkwụsi ike, mgbanwe, nchịkwa dịpụrụ adịpụ) ka ị na-eji ngwa Windows ị dabere na ya.
Unix emela ka o kwe omume ide edemede dị ike. Mmanya na-eme ka o kwe omume ịkpọ ngwa Windows site na scripts nke nwekwara ike ịkwado gburugburu Unix ruo n'ókè ya.
Mmanya na-eme ka o kwe omume ịnweta ngwa Windows na anya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha dị puku kilomita ole na ole.
Mmanya na-eme ka ọ bụrụ akụ na ụba iji ndị ahịa dị gịrịgịrị: wụnye Wine na sava Linux, yana voila, ị nwere ike ịnweta ngwa Windows ndị a site na ọdụ X ọ bụla.
Enwere ike iji mmanya mee ngwa Windows dị na webụ site na iji VNC na ndị ahịa Java/HTML5.
Wine bụ sọftụwia mepere emepe, yabụ ị nwere ike ịgbatị ya ka ọ dabara maka mkpa gị ma ọ bụ mee ka otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ meere gị ya.
Na njedebe nke nkuzi, ị ga-amụta otú e si wụnye na hazie Mmanya na sistemụ Debian 11 Bullseye gị.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịchọpụta ma sistemụ gị bụ 32-bit ma ọ bụ 64-bit nke ọma. Iji mee nke a, gbaa ọsọ lscpu iwu:
Ọ bụrụ na ị chọpụta akara CPU op-mode(s), ntinye a na-agwa ihe ị na-agba.
Iji mebie ya:
32-bit pụtara na ị na-agba ọsọ a 32-bit Linux os
32-bit, 64-ibe na-egosi na ị na-agba a 64-bit OS
Nzọụkwụ mbụ bụ ịgbakwunye i386 architecture.
Ugbu a ịmara ụdị mmanya ị ga-etinye, ị nwere ike ịwụnye ụdị mmanya kacha ọhụrụ na nke kwụsiri ike site na ebe nchekwa Debian.
Maka naanị 32bit:
Maka 32bit na 64bit:
Ị nwere ike kwado ụdị mmanya gị iji nyochaa nrụnye wee wuo site na iji iwu a:
Mara, ịwụnye mmanya sitere na ebe nchekwa ndabara ga-abụ ụdị ochie karịa nke dị ugbu a sitere na WineHQ.
Iji jiri ụdị ọhụụ ọhụrụ sitere na Wine, ị ga-achọ iji ebe nchekwa ha iji wụnye ma ọ bụ melite. A na-emepe mmanya mgbe niile yana mwepu ọtụtụ oge kwa ọnwa maka ndozi, ndozi ahụhụ na ndozi.
Iji wụnye, soro usoro ndị a:
Nzọụkwụ mbụ na ịwụnye ihe nrụpụta mmanya ọhụrụ bụ ibubata igodo GPG:
Ọ bụrụ nbudata na ibubata nke ọma, ị ga-enweta nsonaazụ:
Ugbu a ị webatara ya igodo GPG na ụlọ ọrụ nchekwa, gaba n'ihu tinye Wine site na iji iwu a:
Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye alaka mmepe jiri ihe ndị a:
Mara, ngalaba mmepe WineHQ bụ ụdị mmanya kacha ọhụrụ sitere na ndị mmepe. Ọ nwere ike bụrụ ihe na-akwụghị ụgwọ mgbe niile ma ọ bụ naanị ndị mmepe kwesịrị itinye ya na ọ bụghị nkezi onye ọrụ ọ gwụla ma ịchọrọ ibi na nsọtụ.
N'ikpeazụ, nyochaa ụdị mmanya gị:
Ị ga-enweta mmepụta na-esonụ (Ọmụmaatụ naanị):
Ka ịmalite mmanya, mee iwu ahụ mmanya mmanya site na njedebe gị. Iwu a ga-aga n'ihu ịwụnye Mono na Gecko ma tọọ gburugburu Wine.
Press wụnye ka esi na Mono gaa na Gecko Installer.
Ọzọ, pịa wụnye bọtịnụ ka ịga n'ihu imecha nrụnye ahụ.
Ozugbo ịmechara, a ga-egosi mkparịta ụka nhazi mmanya. Na ngalaba nke ngwanro a, ị nwere ike hazie ntọala mmanya dị iche iche.
Ntọala ndabara kwesịrị ezuru n'ọtụtụ ọnọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị gbanwee ihe ọ bụla, ụdị Windows ga-adabara Windows 7 na ihe na-adịbeghị anya, dị ka Windows 10.
Ozugbo emechara, mechie igbe mkparịta ụka site na ịpị OK bọtịnụ.
Na nkenke ọmụmaatụ, anyị ga-eji Wine tinye ngwa nkata Notepad ++.
Nke mbụ, gaa na download page wee họrọ Versiondị Windows .exe ngwugwu.
Windows x64 ụdị njikọ:
Ozugbo ibudatara ya Ụdị Windows nke Notepad++, gaa na ndekọ ihe nbudata gị ma ọ bụ ebe ị na-echekwa faịlụ ebudatara ma mee iwu njedebe ndị a:
Na-esote, ị ga-ahụ igbe nhazi mbụ pụtara maka nrụnye.
Họrọ asụsụ gị, wee pịa ya OK bọtịnụ.
Ihuenyo na-esote bụ ozi dị nkenke gbasara ndụmọdụ sitere na Notepad++ na nrụnye. Pịa Ọzọ > bọtịnụ ịmalite nrụnye.
Nkwekọrịta ikike Notepad++, pịa Ekwenyere m na-aga n'ihu.
Na-esote bụ ụzọ nrụnye ndabara. Dịka ị na-ahụ, ọ nwere ụzọ nrụnye ndabara dị ka Windows, C: ndị ọrụ Linux nwere ike Ngwa Datapad++. Desktọpụ. Awụnyere ngwa Windows n'ọtụtụ sistemụ dabere na Linux n'ime ~/.wine/drive_c/ ndekọ.
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, hapụ dị ka ndabara, wee pịa ya Ọzọ > bọtịnụ ịga n'ihu na nwụnye.
Họrọ ụdị ọkọlọtọ nwụnye ma ọ bụ omenala wee mee mgbanwe dị mkpa. Ozugbo emechara, pịa Ọzọ > bọtịnụ aga n'ihu.
Mepụta akara ngosi ụzọ mkpirisi, họrọ ya ma ọ bụ ghara, wee pịa ya Wụnye bọtịnụ ịga n'ihu na nwụnye.
Ozugbo emechara, ihuenyo nwụnye ihe ịga nke ọma ga-apụta; pịa Emechaa bọtịnụ ka imepe Notepad++.
Ekele, ị tinyela Notepad++ site na iji Wine na Debian 11 Bullseye.
Mara, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịwụnye ngwa ọ bụla, na-ebu ụzọ were ụdị kwụsiri ike tupu ngalaba mmepe.
Dabere n'ụdị nhọrọ ị na-ahọrọ ka esi etinye mmanya, ụfọdụ ụzọ iji wepụ bụ:
Wepu mmanya 32-bit:
Wepu mmanya 64-bit:
Wepu WineHQ Stable:
Wepu Mmepe WineHQ:
N'ime ntuziaka a, ị mụtala otu esi etinye mmanya, gụnyere ngosipụta nke ịwụnye ngwa Windows .exe site na iji Wine na sistemụ arụmọrụ dabere na Debian gị. N'ozuzu, Wine bụ mmemme magburu onwe ya na ụfọdụ ezigbo uru na-ejikọta Windows na Linux maka onye ọrụ.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Mmanya Mail igodo
Otu esi etinye Java 17 LTS (JDK 17) na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Tor Browser na Fedora 34